Fikorohana rojom-pifandraisana, vodi-tady tariby, lamban-tranonkala - Gostern
Ny orinasa dia manarona faritra 33000 metatra toradroa, mpiasa maherin'ny 600. Orinasa misamotady manokana izay afaka mamolavola, manamboatra ary mivarotra.
Ny tadin'ny tadin'ny rojo / tariby sy ny fitaovana fampiakarana ankehitriny dia be mpampiasa amin'ny metallurgy, milina, lalamby, petrochemical, port, herinaratra, herinaratra nokleary, tafika ary sehatra hafa.
Orinasa misamotady manokana izay afaka mamolavola, manamboatra ary mivarotra.
Jiangsu Gostern Rigging dia mpanamboatra fanta-daza amin'ny fiakarana antsamotady, fametahana ratchet ary fitaovana fananganana manokana any Shina. Mifantoka amin'ny fanaovana fikarohana izahay, mamolavola vokatra vaovao ary manome serivisy namboarina. Manampy ny mpanjifantsika ihany koa izahay hahita ny fomba lavorary amin'ny olany manangana. Ny tadin'ny tadin'ny rojo / tariby sy ny fitaovana fampiakarana ankehitriny dia be mpampiasa amin'ny metallurgy, milina, lalamby, petrochemical, port, herinaratra, herinaratra nokleary, tafika ary sehatra hafa. Vao tsy ela akory izay, nanorina fifandraisana lava amin'ny Dongfang Electric, Shanghai Electric, XCMG Group, China CSR, China CNR izahay. Nalefa tany Etazonia, Korea, Thai, Vietnam ary firenena atsinanan'i Azia izahay.
Thimble sy ferrule
Antsamotady rojo tongotra maro
Amin'ny herinandro voalohan'ny volana aogositra dia manangana fiofanana miaraka amin'ireo mpiasa ao amin'ny efitrano fivoriana izahay. Ny tanjon'ny fiofanana dia ny fanamafisana ny fahatsiarovan-tena amin'ny filaminana sy hiantohana ireo opera azo antoka ...
Mba hanamafisana orina ny mpiasanay dia nandamina ny rihana ambony indrindra izahay ho toy ny Gym-nay, maro ny asanay no afaka miasa ary mifampiresaka amin'ny hafa. Mamorona vintana sy fanoherana bebe kokoa ...
Background of the Hardware and Tools Midd ...
Ny fanjakana enina an'ny Golfa (Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Oman, Bahrain, Qatar ary Koety) dia klioba manankarena eran-tany Arabo, miaraka amin'ny 45% amin'ireo tahirin-tsolika manerantany sy ny ...
Jiangsu Gostern Rigging dia mpanamboatra fanta-daza amin'ny fiakarana antsamotady, fametahana ratchet ary fitaovana fananganana manokana any Shina.